Sida Loo Sameeyo Kooras Online ah Iyadoo WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Sameeyo Kooras Online ah Iyadoo WordPress
Sida Loo Sameeyo Kooras Online ah Iyadoo WordPress
Markaa waxaad rabtaa inaad abuurto koorso online ah laakiin ma garanaysid meel aad ka bilowdo? Waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la helo shay xirfad leh marka aad rabto in aad dadka wax ku barato internetka; waxaa laga yaabaa in lagu daro tababbarka aduunka dhabta ah ee aad bixiso, ama sida kordhinta degelkaaga si duurjoogta ah.
Nasiib wanaag, WordPress wuxuu fududeeyaa dejinta koorsada khadka tooska ah si aad ula wadaagto aqoontaada iyo khibradaada adduunka. Waxaa jira mawduucyo iyo plugins kala duwan oo la heli karo, loogu talagalay in lagu siiyo isticmaalayaasha awoodda ay ku abuuraan oo ay ku bixiyaan koorsooyin shabakadooda WordPress.
Maqaalkani wuxuu ku socon doonaa waxaad u baahan tahay inaad sameyso si aad u abuurto koorso online ah oo leh WordPress, ka dibna fiiri qaar ka mid ah plugin iyo fursadaha mawduuca ee jira.
Tusaalooyinka Koorsooyinka khadka tooska ah
Koorasyada khadka tooska ah ayaa si ballaaran loo heli karaa qaar badanna waxaa lagu dhisay WordPress. Koorasyo ​​badan ayaa ku qarsoon boggaga iibka gadaasha, laakiin waxaan helnay lamaane aad dib u eegi karto si aad u dareento sida loo dejiyay. Tusaale ahaan, WP101 waxay ku sii sugnaanaysaa hadafkooda iyagoo isticmaalaya WordPress si ay u bixiyaan koorsooyinkooda tababar ee loogu talagalay bilowgayaasha WordPress:
Kooraskooda hordhaca ah ee dhammaan aasaaska WordPress waa bilaash. Ama waxaad hubin kartaa liiskayaga buuxa ee Koorasyada WordPress si aad u aragto tusaalooyin badan.
Haddaba, aan ku bilowno qaab la soo gaabiyey oo ah sida loo sameeyo degelkaaga WordPress. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad heshid tusaale ah orodka WordPress, 'maxali' (ie on your PC) ama online. Haddii aad diyaar u tahay inaad hesho martigelinta WordPress, waxaan kugula talineynaa maareeya martigalinta kaas oo wax ka qaban doona rakibaadda, kaydinta, iyo cusbooneysiinta adiga. Dhowr doorasho oo waaweyn ayaa ah:
Matoorka WP: Wuxuu ka bilaabmaa $35 bishii.
Duulaya: Wuxuu ka bilaabmaa $23 bishii.
WP Engine waa hogaamiyaha warshadaha ee martigelinta WordPress la maareeyay.
Martigelinta caadiga ah ee Bluehost waa ikhtiyaar ka jaban $2.95 bishii. In kasta oo qiimaha xayeysiinta loogu talagalay qorshahooda la wadaago Bluehost waxay leedahay ikhtiyaar rakibaad degdeg ah oo loogu talagalay WordPress kaas oo kaa caawinaya inaad diyaar u noqoto WordPress daqiiqado gudahood.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku bilowdo rakibaadda maxalliga ah beddelkeeda, waxaad ku dhejin kartaa WordPress kumbuyuutarkaaga si fudud ugu shaqeeya OS X, Windows, ama Ubuntu. Marka aad ku faraxsan tahay goobtaada, waxaad ka wareejin kartaa boggaga WordPress ka localhost una guuri kartaa martigeliyahaaga webka. Iyada oo la dhisay WordPress, maxaa xiga? Aynu eegno qorsheynta koorsadaada.
Hadda oo website-kaagu diyaar yahay, xamaasadu way dhismi doontaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto oo aad si taxadar leh uga fikirto tallaabada xigta. Kahor intaadan dooran plugin ama mawduuc kaa caawinaya inaad dejiso koorsadaada internetka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca koorsada aad rabto inaad abuurto.
Wax badan ayaa gala qorshaynta koorsada khadka tooska ah, laakiin kuwani waa qaar ka mid ah tixgalinta aasaasiga ah si loo go'aamiyo habka ugu fiican:
Dulucda koorsada. Tani waa laga yaabaa inay tahay tallaabada kaliya ee ugu muhiimsan ee qorsheynta koorsadaada. Haddii aadan aqoon sida aad u rabto in aad u qaabayso maaddada koorsadaada (qaybaha iyo casharrada, mowduucyada hoosaadka iwm.), way adkaan doontaa in koorsada loo dejiyo si sax ah si loo daboolo baahiyahaaga, waxaana laga yaabaa inaad doorato xal khaldan.
Nooca nuxurka. Koorsada qoraalka-kaliya waxaa loola dhaqmi karaa si ka duwan koorsada warbaahinta badan. Waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto noocyada nuxurka aad rabto in koorsadaada lagu daro (tusaale qoraal, muuqaal, ama kedis).
Xayiraadaha koorsada. Koorsada bilaashka ah waxaa laga yaabaa inay aad uga sahlanaato dejinta marka loo eego mid u baahan xeerar xubinnimo oo adag. Waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso sida aad u rabto in koorsadaada loo dejiyo, iyo nuxurka ay heli doonaan dhegaystayaashooda.
Habka qaybinta. Helitaanka dhammaan macluumaadkaga koorsada la heli karo marka ardaygu saxiixo ayaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin, laakiin waxa laga yaabaa inaad door bidayso inaad agab ku diyaariso jadwal (sida 'content drop').
Hadda oo aad ogtahay waxa aad abuurayso, aan eegno xalalka qaarkood ee lagu caawinayo.
Koorsooyinka khadka tooska ah
Waxaan u doorannay dhowr ka mid ah plugins-yada la heli karo si aad u tixgeliso hoosta - qaar ka mid ah plugins-yada ugu fiican ee maareynta koorsada khadka tooska ah.
1. Sensei (laga bilaabo $129)
Nooga imaanaya WooThemes (kooxda ka dambeysa WooCommerce) waa Sensei (laga bilaabo $ 129 hal goob). Is dhexgalka saxda ah ee WooCommerce iyo dhammaan mawduucyada WooThemes, oo lagu daray kordhin ballaaran oo la heli karo si loo habeeyo bixinta koorsadaada, ka dhig mid doorasho adag.
2. WP Courseware (laga bilaabo $99)
Jiid-oo-jiid jidkaaga adoo ku dhisaya koorsada WP Courseware (wuxuu ka bilaabmaa $99 laba shati oo goob ah). Xalkan koorsada tooska ah ee tooska ah ee tooska ah ee tooska ah waxa uu la midoobaa dhammaan agabka ganacsiga e-commerce ee waaweyn.
3. LearnPress (Bilaash)
Qalabka Maareynta Waxbarasho ee WordPress oo dhamaystiran (LMS), LearnPress waa ikhtiyaar bilaash ah koorsooyinkaaga khadka ah. Dhowr add-ons bilaash ah ayaa diyaar ah si loo kordhiyo shaqeynta, iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa qaaliga ah (laga bilaabo $ 19.99) si ay u sii socdaan xitaa.
4. Koorasyada Zippy ($199)
Koorsooyinka Zippy waa madal koorso-hal-hal ah oo si fudud loo isticmaali karo.
Ilmaha maskaxda ee Derek Halpern, aasaasaha Kiciyeyaasha Bulshada, Koorasyada Zippy waa barnaamij koorsada tooska ah oo dhan-hal ah (oo laga heli karo $199) kaas oo ay ku jiraan is dhexgalka ku dhex jira suuqgeynta iimaylka, albaabada lacag bixinta, iyo falanqaynta faahfaahsan.
5. LearnDash (laga bilaabo $199)
LearnDash waa sifo kakooban, LMS qaali ah (laga bilaabo $199 halkii goobba), kaas oo runtii leh is dhexgalka heerka warshadaha LMS, sida Tin Can API. Haddii aad u baahan tahay is-dhexgalka LMS oo run ah, tani waa doorasho cad.
6. LifterLMS (Bilaash)
LifterLMS waa ku kordhin cusub booska koorsada onlaynka ah. Waa plugin bilaash ah, laakiin nooca premium ($99 sanadkii) wuxuu bixiyaa taageero dheeraad ah, sawiro lagu daray, iyo mawduucyo qaali ah. Kordhinta Premium waxay sii kordhisay shaqeynta.
Mawduucyada Koorasyada khadka tooska ah
Waxaa jira mawduucyo badan oo loogu talagalay bixinta koorsooyinka khadka ah, markaa tani waa uun xulashada qaar ka mid ah xulashooyinkayaga, si aan u tuso waxa suurtagal ah. Waxaad ka eegi kartaa qaar kale liiskayaga mawduucyada WordPress ee waxbarashada ugu fiican.
WPLMS waa nidaamka maamulka waxbarashada bulshada oo lagu dhisay BuddyPress, dabcan, macalinka, iyo maamulka ardayda. Waa xal loo dhan yahay oo lagu abuurayo goob wax lagu barto oo onlayn ah.
BuddyBoss ee LearnDash waa wax ka badan mawduuc fudud - Waxay u badan tahay sida madal. Ikhtiyaarada ku dhex jira iyo astaamaha qaabaynta, madaxa la hagaajin karo & cagta, sumayntii, dhisitaanka bogga iyo dabcan LearnDash (su'aalo horumarsan, saacadeeyayaasha casharrada, warbixinnada isticmaaleyaasha, iwm.) BuddyBoss wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad u baahan karto. Waxaa dheer interface-ka cusub ee LearnDash-Gutenberg, abuurista waxyaabo gaar ah ayaa xitaa dhakhso badan oo fudud
Mawduuca Maareynta Waxbarashada Akadeemiyada waxaa ka mid ah koorsada la dhisay iyo maamulka isticmaalaha, iyo is dhexgalka WooCommerce. Mawduucan waxa uu awood kuu siinayaa in aad si fudud u wadaagto oo aad u iibiso aqoontaada.
4. Koorsada Bisadaha
Bisadaha Koorasku waa mawduuc WordPress ah oo dhan-hal ah oo loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad abuurto koorso khadka ah, la dhexgeliso pluginsyada lagama maarmaanka ah, oo aad dhisto boggaga iibka koorsada.
Mawduuca LMS waa mawduuc maarayn waxbarasho oo awood leh oo loogu talagalay in lagula shaqeeyo Sensei. Waxa ay ku dartay nakhshad horumarsan iyo fursadaha qaabaynta boggaaga internetka ee koorsada.
6. Koorso xariif ah
Koorsada xariifka ah waa mawduuc LMS WordPress ah oo la heli karo. Loogu talagalay in lagugu caawiyo abuurista iyo iibinta koorsooyinka khadka tooska ah iyo goobta labadaba, waxa ku jira sifooyin kala duwan oo dhamaystiran oo ku jira xidhmo is-ka kooban.
Abuuritaanka koorsada internetka ee WordPress ma aha mid adag, waxaana si dhakhso ah loo samayn karaa iyada oo la adeegsanayo mawduuc ama plugin. Waa inaad qabataa shaqada adag ee qorsheynta koorsada iyo abuurista agabka, laakiin WordPress-ka waxaad ka heli kartaa koorsada lafteeda khadka oo ay heli karaan ardaydaada waqti yar.
Waxaan ku siinnay dulmar ku saabsan sida loo sameeyo koorsada internetka iyadoo la adeegsanayo WordPress, si aad u dejiso goobtaada, u qorsheyso koorsadaada, dooro mawduuc ama plugin, oo aad maanta bilowdo.
Waxaan hadda yareynay dusha sare ee abuurista koorso online ah, markaa haddii aad wax su'aalo ah ama talo soo jeedin ah qabtid, fadlan noogu soo sheeg qaybta faallooyinka ee hoose! Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno talooyinkaaga iyo tabahaaga abuurista koorsooyinka khadka tooska ah ee WordPress.
8 Khaladaadka Suuqgeynta ee Baraha Bulshada aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso